दुधपोखरी समृद्धि बनाउने आधारहरु छन् : वडाअध्यक्ष विर्ख
जेठ २९, २०७४
काठमाडाैं । २०४४ सालमा दोलखास्थित ताम्चेत दुधपोखरीमा गाविस भरकै दोस्रो एसएलसी उतीर्ण गरेका बिर्खबहादुर तामाङले राजनितिक यात्रा पनि त्यसैदेखि नै शुरु गरेको हो । सैलुङ गाउँपालिकामा रहेको दुर्गा माविबाट २०४४ सालमा एसएलसी गरेका तामाङले २०४६ मा सरस्वती प्रा.वि. को स्थापनासँगै ११ जना विद्यार्थीको पठनपाठन सुरु गरेर शिक्षक पेशामा जागिरे भएको थिए । २०४८ मा दुधपोखरी निमाविमा कार्यरत भएर १ बर्ष कार्यरत भई राजीनामापछि राजनितिक यात्रामा सक्रिय भई लागेको हो ।
दुर्गा माविबाट २०४४ सालमा एसएलसी पास गरेका थिए । गाबिसबाटै एसएलसी गर्नेमा उहाँ दाेस्राे हुन् ।
राजनितिक यात्रालाई निरन्तरता दिदै २०७४ सम्म आइपुग्दा नयाँ संरचनाअनुसार नेकपा एमालेबाट वडाअध्यक्षमा प्रत्यासी उम्मेदवार भई भारी मतले विजयी भएको छ । वहाँसँग रही अबको पाँच बर्ष कार्यकालमा गर्ने योजना र विकासबारे सैलुङअनालइनसँग गरेको छोटो कुराकानीः
सर्वप्रथम विजयी हुनुभयो ? कार्यकालको शुभकामना, बधाई । यससँगै तपाईका कार्यकालमा गर्ने योजनाहरुको बारेमा बताइदिनुहोस न ?
धन्यवाद । प्रश्नको लागि । मेरो कार्यकालमा गरिने कार्यहरु चाहि विशेष गरी दुधपोखरीलाई समृद्धि बनाउने नै हो । समृद्धि बनाउने ५।७ वटा आधारहरु बनाएको छु । यस गाउँमा चल्ने सडकखण्डमा बाह्रैमास गाडी गुडाउने, कृषि, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने जमर्काे गरेको छु । युनिसेफसँगको सहकार्यतामा स्वास्थ्य भवन एक बर्षभित्रमा तयार बनाउँछु ।
तपाईले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेका सबै योजनाहरु पुरा होला ?
घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसारको योजनाहरु छ । मेरो कार्यकालमा सम्पन्न नभएपनि सुरुवात मात्रै भए पनि गर्नेछु । सिचाइ र सडकखण्ड पाँच बर्षभित्रमा सम्पन्न गर्छु । आलुको लागि भण्डारण, चिस्यान केन्द्र २ बर्षभित्रमा सम्पन्न गर्छु ।
युवाहरु विदेश पलायन हुन नदिन के योजना ल्याएको छ ?
साना किसान सहकारी संस्था हुँदोरहेछ । त्यसमा रहेर काम गर्न सकिन्छ । त्यस ५०–६० जना निर्भर हुन सकिन्छ ।
जनताले तपाई अमुल्य मत दिई जिताउनुभयो ? उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरु प्रति आभार ब्यक्त गर्दै मुरीमुरी धन्यवाद । उहाँहरुले चाहेको नेतृत्वलाई जिताएकोमा धन्यवाद । सैलुङअनलाइनलाई पनि धन्यवाद । यो विजयी मेरो ब्यक्तिगत नभई सिंगो द्ुधपोखरीबासी र युवा पुस्ताको रहेको छ ।
(सन्तोष तामाङले गरेका कुराकानीमा आधारित)
उहाँसँग सैलुङ टिभीले गरेका कुराकानी (भिडियोमा)
एक वर्षमा के के गरे सुनापति गाउँपालिकाले ?
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । चुनावमा ...
‘पार्टीले ठाडो अन्याय गर्दा झोक चलेको छ’ : नेता सहयात्री
सरल सहयात्री, जसले जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समय देश र जनताको मुक्तिका खातिर ...
नेपाल आदिकालदेखि गाई खाने देश होः डोरबहादुर विष्ट
(दुई दशकअघि २०५२ जेठ २० शनिबारका दिन समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टसँग चर्चित पत्रकार/सम्पादक ...
‘धेरै नेपाली विद्याथीहरु जपानमा पैसा कमाउने उदेश्यले आउँछन्’– खगेन्द्र खत्री
विगत लामो समयदेखि नै नेपाली विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा आर्जनका लागि विकसित देशहरुमा ...